Messi, Rice, Bernardo, Mane, Pogba, Neves, Kane, Asensio, Haaland, Coutinho & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga. – Banaadirsom | BANAADIRSOM
Home Ciyaaraha Messi, Rice, Bernardo, Mane, Pogba, Neves, Kane, Asensio, Haaland, Coutinho & Wararkii...
Messi, Rice, Bernardo, Mane, Pogba, Neves, Kane, Asensio, Haaland, Coutinho & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga. – Banaadirsom
David Beckham ayaa wadahadalo la qaatay Lionel Messi si uu kooxdiisa Inter Miami u keeno marka uu dhoco heshiiskiisa kooxda PSG (Mirror).
Xiddiga khadka dhexe ee kooxda West Ham ee Decline Rice oo diirada u saaran Man United iyo chelsea ayaa doonaya in uu isaga tago kooxda xilli West Ham dul dhigtay lacag dhan 100 milyan oo euro (Telegraph).
Kooxda Ac Milan ayaa wadahadalo Kula jirta kooxda Man City si ay uga hesho saxiixa xiddiga khadka dhexe ee Bernardo Silva (Star).
Kooxda Tottenham ayaa Man United iyo Arsenal uga horaysa baacsiga xiddiga khadka dhexe ee kooxda Bayern Munich ee Corentin Tolisso (Sky Sport).
Kooxda Arsenal ayaa si lama filaan ah ugu dhaqaaqaysa saxiixa xiddiga kooxda Real Madrid ee Marcos Asensio (Fichajes).
Xiddiga khadka dhexe ee kooxda Tottenham ee Ndombele ayaa doonaya in uu midkood ku biiro kooxaha Real Madrid, Barcelona ama Bayern Munich (AS).
Kooxda Tottenham ayaa sidoo kale si lama filaan a uga dhaqaaqi karta saxiixa xiddiga kooxda Liverpool ee Sadio Mane (Tuttosport).
Kooxda Man United ayaa wali xiiso u qabta saxiixa xiddiga khadka dhexe ee kooxda Wolves ee Ruben Neves (Sunday).
Tababaraha Kooxda PSG Ayaa diiday in uu meesha ka saaro in ay kooxdiisu u dhaqaaqdo saxiixa xiddiga khadka dhexe ee Paul Pogba (Manchester Evening News).
Kooxda Man City ayaa doonaysa in ay u dhaqaaqdo saxiixa xiddiga khadka dhexe ee kooxda Barcelona ee Ilaix Moriba (Mundo Deportivo).
Kooxda Man City ayaa wali 50 milyan ka hoosaysa lacagta ay Tottenham ku qiimayso xiddiga Harry Kane ee 150 milyan oo euro (Mirror).
Xiddiga kooxda Borussia Dortmund Erling Haaland ayaa laga yaabaa in uu ka tago kooxda marka la gaadho suuqa January ee bilowga sanadka dambe (Mirror).
Kooxda Liverpool ayaa isku dayaysa in ay u dhaqaaqdo saxiixa xiddigeedii hore ee Philippe Coutinho inta lagu jiro suuqa xagaagan (Mirror).
Tababaraha Kooxda Man United Ole Gunnar Solskjaer ayaa xaqiijiyay in uuna xiddiga Paul Pogba ka tagi doonin kooxda xagaagan (Mail).
Tababaraha Lionel Messi ee Ronald Koeman ayaa qirtay in ay kooxuhu Barcelona uga cabsan jireen Lionel Messi (Mail).
Xiddiga weerarka uga ciyaara Inter Milan ee Lautaro Martinez ayaa iska diiday dalab weyn oo uu ka helay Arsenal si uu u sii joogo Inter Milan (Mail).
Sii Akhriso: Faah-Faahino Yar Oo Ay Gabadha Uga Fiirsato Ninka Kulankooda Ugu Horeeya, Iska Sax Arimahan Ninow.
Previous articleSomaliland & Kenya oo kala saxiixday heshiis Cusub + Ujeedka
Next articleMaxay shabakada Abaarso ka tiri dhaliilaha loo jeediyey iyo kiiska ka dhanka ah Joy?